၁။ A Study of the Verbal Description of the Duck poem by Zawgyi, Universities Research Journal, Dec,2009, Vol.2. No.7, Page 107-111
၂။ A Study on Suffix ‘Tar ‘ in Myanmar Language, Universities Research Journal, Dec, 2012, Vol.5. No.7, Page 9-15
၃။ ရှေးကဗျာများ၏ကဗျာဖွဲ့စည်းမှု, M.A.A.S, June, 2006, Vol.Iv.No.7, Page 15-38
၄။ ‌ဒေ၀ကုမ္ဘန်ပြဇာတ်ဖြစ်စဉ်ခင်းကျင်းမှုကို လေ့လာခြင်း, M.A.A.S, July, 2007, Vol.V. No6A, Page 147-170
၅။ ဣန္ဒာ၀ံသနန်းတွင်းဇာတ်တော် ကြီး၏ အခင်းအကျင်း, M.A.A.S, June,2008, Vol.VI. No6A, Page 61-78
၆။ ကိုးခန်းပျို့မှ အသံသရုပ်ဖော်မှု လေ့လာချက်, M.A.A.S, June, 2010, Vol.VIII. No7A, Page 297-310.
၇။ ‌ခေတ်သစ်ဆန်းပြီပြဇာတ် အခင်းအကျင်း, M.A.A.S, March, 2012, Vol.X, No.7, Page 257-274
၈။ ခလောက်နို့ ပုံပြင်များ၏ ဟာသအမြင်များ, M.A.A.S, June, 2016, Vol. XIV,No.6, Page 381-396.
လုပ်ငန်းသုံးမြန်မာစာ – မ-၁၀၀၂၊ ပထမနှစ်၊ မြန်မာစာ – မြန်မာစာဌာန၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်။
မြန်မာရိုးရာပုံပြင်များ – Text and Study Guide – မြန်မာစာဌာန၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်။
၃၀-၁၁-၂၀၁၈ မှ ၃-၁၂-၂၀၁၈ အထိ ထိုင်းနိုင်ငံ ၊ Kanchanaburi Rajabhat University တွင် Pre-Discussion တက်ရောက်ခြင်း။
၁-၁၁-၂၀၁၉ မှ ၂၃-၁၁-၂၀၁၉ အထိ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ National Institute of Educational Planning & Administration (NIEPA) မှ INTERNATIONAL PROGRAMME IN EDUCATIONAL MANGEMENT FOR EDUCATIONAL ADMINISTRATIORS FROM MYANMAR တက်ရောက်ခြင်း။
၂၀၁၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလမှစ၍ TIDE Project – Focal Leads
၂၀၁၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလမှစ၍ Change Management – Focal Leads
၂၀၁၈ ခုနှစ်မှစ၍ Quality Assurance Unit – Focal Leads
(၂၁-၂-၂၀၂၀)ရက်နေ့ ထားဝယ်တက္ကသိုလ်၏ ”ကြွေရတုမွေးနေ့” တွင် သုတေသနညီလာခံ ကျင်းပခြင်း ၊ ဘာသာရပ်ပြခန်းများနှင့် ဌာနအလိုက် ဥယျာဉ်အလှဖော်ထုတ်ခြင်းများ၊ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်၊ နည်းပညာတက္ကသိုလ်များနှင့်ပူးပေါင်း၍ product show များပြသခြင်း တို့ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
Total views : 68651